ရွှေပြည်တော်… ခေါ်သံများနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ရွှေပြည်တော်… ခေါ်သံများနဲ့	13
Posted by Thint Aye Yeik on Mar 24, 2015 in Creative Writing, History, My Dear Diary, Short Story | 13 comments
photo – internet/ ကိုယ်က (C) ဖြစ်သည်။
A နှင့် B တို့
စကား တွတ်ထိုးနေချိန်လည်း ဖြစ်သည်။
A ကို B က ဘာတွေမသိ အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြနေခြင်းအား ကိုယ်(C)က မကြည့်ဘဲ မြင်နေခြင်းလည်း ဖြစ်၏။
ထိုအချိန်မှာပဲ ဗြုန်းခနဲ A ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းသူများ ရောက်လာသည်။
စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအပြီးမှာ A ကို ဆွဲခေါ်သွားကြသည်။
အကြောင်းမှာ A သည် ဘာကိုမှ သိတယ်မရှိ အိုးတိုးအတဖြစ်နေလို့
ထို့နောက် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် A ကို ဆွဲခေါ်သွားသူများ ပြန်ရောက်လာပြီး B ကိုလည်း စစ်ဆေးမေးမြန်းပြန်သည်။
စစ်ဆေးမေးမြန်းအပြီးမှာ သူတို့က B ကိုလည်း ဆွဲခေါ်သည်။
B ကို ဆွဲခေါ်သွားရခြင်း အကြောင်းကတော့ B သည် အစစအရာရာ အကုန်သိနေပြီး သိတာတွေ များနေလို့ ဖြစ်သည်။
ကိုယ် (C) မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းမှာ ဤသို့ အနေအထားရှိသည်။
1. A ကို B က ရှင်းလင်းပြောပြ၊
3. ဘာမှမသိ၍ A ကိုဖမ်းခေါ်
4. ဆွဲခေါ်သူများ ထပ်ရောက်
5. သိတာတွေများ၍ B ကို ဖမ်းခေါ်၊
6. အဖြစ်အပျက်ကို C က မြင်တွေ့၊
ဖြစ်စဉ်ကို သုံးသပ်အပြီးမှာပဲ . . .
ကိုယ်(C) . . . ခေါ်သံများ ကြားလိုက်ရသည်။
”ဟေ့. . . မင်း. . . မင်းနာမည်က ဘာလဲ”
”ဗျာ. . . ကျနော်လား. . . ကျနော်က C ပါ”
” မင်း သိထားတာ ဘယ်လောက်ရှိလဲ”
”ဟဲဟဲ . . . နည်းနည်းပါ”
” မင်းမသိသေးတာတွေကရော. . .”
”အဟဲ . . နည်းနည်းဆိုပါတော့”
”အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြည့်မြင် ခံစားနေတာပါခင်ဗျ”
” အေး. . . လာ. . .လိုက်ခဲ့စမ်း”
”ဗျာ . . . ကျနော့်ကို ဘာလို့ ဖမ်းတာလဲ”
”တိတ်စမ်း !! မင်းကို ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ ထိန်းသိမ်းတာကွ!!! ထိန်းသိမ်းရခြင်းအကြောင်းရင်းက မင်းဟာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာတွေကို ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်ပြီး မြင် သိနေလို့ပဲ . . . လာခဲ့”
ဖြစ်စဉ် အမှတ် =
7. ကြည့်မိသူ C အား ဖမ်းခေါ်ခြင်း။
ထို့နောက်. . .
စစ်ဆေးမေးမြန်းသံများး. . .
.ခေါ်သံများး. . .
ထို့အပြင်. . .
D မှ Z အထိ ပြေးလွှားရုန်းကန်သံများ . . . တဝုန်းဝုန်း တရုန်းရုန်းးးးးး
12 / 03 / 2015 / 12 : 50 PM
Kaung Kin Pyar says: သိလို့ရော..
ဒီလို ရေးပုံလေး သဘောကျတယ်……
Alinsett@Maung Thura says: အားပေးတဲ့အတွက် ဇူးဇူးပါ
ကျစ်လျစ်အောင်တော့ မနည်း ရေးယူရတယ်ဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ငါက D ကွ
အွန်လိုင်းကပဲ ကြည့်တယ် မြင်တယ် သိတယ် ဟဲ ဟဲ ဟဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: ခဏ လိုက်ခဲ့ပါ D Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ပို့စ့်​​မော်​ဒန်​ ! <3
Alinsett@Maung Thura says: ဒါ post modern ဟုတ်သေးဘူးဗျ
modern ခေတ်ဦးက ရေးဟန်လောက်ပဲ ရှိသေး
naywoon ni says: တစ်​ကယ်​​တော့ ​မော်​ဒန်​တို့ ပို့စ်​​မောဒန်​တို့ တို့ဆီမှာ သုံးလာတာက အာဏာရှင်​စီစစ်ေ ရးကို ​ကျော်​ဖြတ်​နိုင်​ဖို့ ​ရေးရာကစလာတယ်​လို့ ထင်​တာပဲ ။ ကိုယ့်​အမြင်​ကို​ပြောတာ​နော်​ ။ စစ်​စစ်​​ရေးကလည်း အဲ့ဒိလို ​တွေပါလာရင်​ ​ခေါင်း​မွေးဖြူမတတ်​ စဉ်းစားမရ​တော့ ဒီစာလုံးပါရင်​ ဖြတ်​ စနစ်​​တောင်​ကျင့်​သုံးလာရသတဲ့ ။
ခင်ဇော် says: ကြယ် လေးလုံးဖြစ်သွားပြီ။
အေ တူ ဇီ က
ဘာတွေကို ဘယ်လောက်ပဲ သိသိ
Alinsett@Maung Thura says: ကျနော်လား…ကြယ်လေးလုံး ဖြစ်တာ လေးငါးခြောက်ရက်တော့ ရှိသွားပြီ…
.ကြယ်လေးလုံးသမားတွေ တစ်သိန်းပြည့်ရင် သဂျီးက လေးဆ ပေးမယ်တဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: အဲဒီ ABCD..Z တွေကို.. ဆွဲတဲ့ပုံဆွဲဆရာနေရာမှာ.. နေပါလေ..။
အနီလေးနဲနဲကဲပေးထားတာကို.. အပြာလေး…ပြင်ကဲလိုက်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says:aကနေ z အထိ ဖမ်းအပြီးးးး
Shwe Ei says: -လူဖမ်းတဲ့ စနစ်ကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် မြေ့ပာင်းလဲဝူးနော်..
Alinsett@Maung Thura says: စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ရင်…
ဖမ်းရတာ တောက်ကျင့်ပါနေလို့ပေါ့နော်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.